“Waxaan ku tiirsanaan doonaa Cristiano Ronaldo sababtoo ah waa kan ugu fiican’… Cédric Soares – Gool FM
“Waxaan ku tiirsanaan doonaa Cristiano Ronaldo sababtoo ah waa kan ugu fiican’… Cédric Soares
(Russia) 21 Juunyo 2018. Difaaca reer Portugal iyo Southampton Cédric Soares ayaa wuxuu xaqiijiyay in xulkiisa qaeanka uu si weyn ugu tiirsan yahay gooldhaliyaha ugu sareeya taariikhda kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo, sababa la xiriira inuu yahay kan ugu wanaagsan taariikhda.
Cristiano Ronaldo ayaa haatan hogaaminaya gool dhalinta koobka aduunka 2018, wuxuuna dhaliyay 4 gool.
Cédric Soares ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay; “Portugal waxay si weyn ugu tiirsan tahay Cristiano Ronaldo, sababtoo ah waa kan ugu wanaagsan dunida, sidaas daraateed waa inaan ku tiirsanaanaa awoodiisa’.
“Waxaan ku faraxsanahay dhamaanteen Cristiano Ronaldo, waana midaan ku faaneeno inaan ku tiirsanaano adeegiisa’.
Maradona oo taageero buuxda u muujiyay Lionel Messi kulanka Croatia +SAWIRRO
DAAWO Sawiradii laga qabtay goolhaye Willy Caballero kadib goolkii uu isku salaxay